ब्रह्मदेबमा सडक निर्माणमा भारतीय एसएसबीको अवरोध
March 23, 2019 3:41 am
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ९ ब्रह्मदेबमा भारतीय एसएसबीले सडक निर्माण अवरोध गरेको छ । एसएसबीको अवरोधपछि केही दिनका लागि सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । दुई देशका प्रशासन प्रमुखबीच चैत १३ गते सीमा बैंठकमा छलफल गर्ने मौखिक सहमतिपछि निर्माण रोकिएको छ ।
भीदमत्त नगरपालिकाले ब्रह्मदेब बजारदेखि ३ नम्बर सीमा स्तम्भसम्मको सडक कालोपेत्रका लागि निर्माण सुरु गरिएको हो । भीमदत्त नगरपालिकाले ठेक्का आव्हान गरी सडक निर्माण सुरु गरेको हो । न्यून जोशी कन्स्ट्रसनले ४३ लाखमा ठेक्का लिएको छ ।
न्यून जोशी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भीम जोशीले निर्माण सुरु गरिएपछि भारतीय एसएसबी आएर अवरोध गरेको बताए । ‘काम सुरु गरिएको थियो, त्यसपछि माथिको आदेश भनेर एसएसबीले काममा अवरोध ग-यो’ उनले भने ।
३ नम्बर पिल्लरदेखि ब्रह्मदेब बजारसम्म १ सय ३८ मिटर सडक कालोपत्रेत्रका लागि ठेक्का दिइएको हो । यस अघि भारतले ब्रह्मदेब बजारसम्म सडक कालोपत्रेत्रका लागि रेखाङकन गरेको थियो । भीमदत्त नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको दबावपछि भारतीय पक्ष नेपाली भूमिमा सडक निर्माणबाट पछि हटेको थियो ।
टनकपुर बाँधदेखि ब्रह्मदेब बजारसम्म एक हजार तीन सय मिटर बाटो छ । त्यसमध्ये भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरि सकेको छ ।
सिद्धनाथ मन्दिर आउने दर्शनार्थी र स्थानीयलाई आवतजावत सहजताका लागि भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सडक निर्माण अघि बढाएका हुन् । ब्रह्मदेब बजारसित जोडिने यो सडक टनकपुर बाँधको पूर्वपट्टि पर्छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नेपाली भूमिमा सडक बनाउँदा अवरोध गरिनु राम्रो नभएको बताए । ‘नगरपालिकाले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिरहेको छ, त्यसमा अवरोध गरिनु राम्रो होइन’ उनले भने, ‘यस किसिमका वाधा यस अघि पनि आएका छन्, त्यसमा छलफल गरी अघि बढेका छौ, यसमा पनि छलफल गरी टुङ्गो लगाउँछौ ।’
नगर प्रमुख विष्टले सडक निर्माणमा अवरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित समन्वय गरी समाधानका लागि छलफल थालिएको बताए ।
‘सडक निर्माणको जानकारीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसंग समाधानका लागि समन्वय गरिएको छ, त्यस अनुसार वहाँ त्यता जानु भएको छ, उता (भारत) को डिएम तहमा कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य समस्या जस्तै यसको पनि समाधान हुने आशा राखेका छौ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशिल वैद्य सहित सुरक्षा अधिकारीहरुले शनिबार सडक निर्माण स्थलमा पुगेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले सडक निर्माण अवरोध सम्बन्धी भारतका डिएमसित कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
‘उताका एसडिएम र एससएबीका अधिकारीसित स्थलगत अनुगमनका क्रममा छलफल भयो, डिमएसंग फोन कुरा भएको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले भने, ‘दुबै पक्षको सहमति अनुसार अघि बढ्छौ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले चैत १३ गते दुबै देशको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीबाट सीमा यकिन गरी चैत १३ गते वनबासामा बस्ने द्विपक्षीय सीमा बैठकमा विवाद समाधान गरिने बताए । ‘२७ तारेखसम्म निर्माण नगर्ने कुरा भयो, बैठकबाट हल गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ’ उनले भने ।
सडक निर्माणमा अवरोधपछि वडा नं. ९ का अध्यक्ष राम नाथ सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सडक निर्माण स्थलल पुगेका थिए । वडा अध्यक्ष नाथले विना कारण एसएसबीले सडक निर्माणमा अवरोध गरेको बताए ।